अपडेट : कहाँ के भयो ? इटली, अमेरिका र स्पेनकाे अवस्था डरलाग्दो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अपडेट : कहाँ के भयो ? इटली, अमेरिका र स्पेनकाे अवस्था डरलाग्दो
अपडेट : कहाँ के भयो ? इटली, अमेरिका र स्पेनकाे अवस्था डरलाग्दो	तिन देशमा गरी २२ हजार ४६ नयाँ संक्रमित, १५ सय ६८ को एकैदिन मृत्यु
चैत १२ गते, २०७६ - ०९:११
विशेषज्ञहरुले भनेका छन् भाईरसको इपिसेण्टर भारत बन्न सक्छ र अमेरिका पनि अछुतो रहने छैन ।
काठमाडौं । कोरोना भाईरसको आतंक झनझन बढ्दै गईरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भईरहेको छ । मंगलबारदेखि विहिबार विहानसम्मको अवस्था हेर्दा विश्वमा नयाँ संक्रमित ४२ हजार ५ सय २२ जना देखिएका छन् भने २२ सय ९६ ले ज्यान गुमाएका छन् ।
इटली, अमेरिकामा तिव्र रुपमा फैलिईरहेको भाइरसले स्पेनमा पनि तिव्रता दिईरहेको छ । इटलीमा एकैदिन ५ हजार २ सय ४९ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ७ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाई कुलमा ६ हजार ८ सय २० मानिसलाई गुमाईसकेको छ ।
उता अमेरिकामा मृत्युदर अन्यत्रभन्दा कम देखिएपनि संक्रमणको संख्या अत्यासलाग्दो छ । ५३ हजार ६ सय ९ जना कुल संक्रमितमध्य ९ हजार ८ सय ७५ पछिल्लो २४ घण्टामा भेटिएका संक्रमित हुन् । ६ सय ९८ जनाले ज्यान गुमाईसकेको अमेरिकाभन्दा संक्रमित संख्या कम रहेको स्पेनमा भने ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार ९ सय ९१ पुगेको छ । स्पेनमा कुलमा ४२ हजार ५८ संक्रमितमध्य ६ हजार ९ सय २२ पछिल्लो २४ घण्टामा भेटिएका संक्रमित हुन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै स्पेनमा ६ सय ८० जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् ।
माथिको आँकडा अनुसार इटली, अमेरिका, पछि स्पेनमा तिव्ररुपमा भाईरसले आक्रमण गरिरहेको छ । युरोपियन मुलुकहरुमध्य जर्मनी र फ्रान्सको अवस्था पनि गम्भिर नै छ । यता इरानपनि भाईरसको तिव्र चपेटामा छ । १९ सय ३४ ले ज्यान गुमाईसकेको इरानमा २४ हजार ८ सय ११ संक्रमित छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै इरानमा १७ सय ६२ संक्रमित भेटिएका छन् ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि नयाँ संक्रमितको संख्या भेटिन छोडेको छैन । ५ सय ३६ कुल संक्रमित संख्या रहेको भारतको जनसंख्या र मोदी सरकारले लगाएको कप्mर्यु उलघंनका दृश्यले निकै डरलाग्दो अवस्थामा भारत रहेको छ । विशेषज्ञहरुले भनेका छन् भाईरसको इपिसेण्टर भारत बन्न सक्छ र अमेरिका पनि अछुतो रहने छैन ।
चैत १२ गते, २०७६ - ०९:११ मा प्रकाशित